Arbaco, March 07, 2012 (Moment Media group) Nairobi , Kenya – dhalinyaro Soomaali ah oo laga soo daayay xabsiyada dalka Tanzania ayaa warbaahinta kula hadlay magaalada Nairobi, kuwaasoo soo bandhigay baaxada ay le’egtahay dhibaatada ay qabaan dadka Soomaalida ah ee ku jira xabsiyada dalka Tanzania iyo sida safaarada Soomaalidu aysan dadkaas wax ugu qaban.
Dhalinyaradan oo gaarayay 20 ruux oo ay dushooda ka muuqatay xaaladii adkayd ee ay soo mareen ayaa sheegay in markii la xiriyay laga soo qabtay waddanka Mozambique , oo ku soo daadiyay xuduuda Tanzaaniya uu la wadaago dalkaasi.
“Askarta Mozambique ayaa nasoo qabatay, waxay nagala baxeen dharkii oo dhan, annaga oo qaawan ayay xadka nagu soo daadiyeen”. Ayuu yiri C/laahi C/raxmaan Cumar oo ay ka muuqatay xaalad nololeed oo adag.
“Waxaan ahayn rag iyo dumar annaga oo qaawan ayaan 3 maalmood cunaynay caleenta geedaha oo aanaan xataa helin waxaan dhaxanta ku huwano, waxaana markaas kadib nasoo qabtay ciidanka dalka Tanzaaniya oo na geeyay xabsi”. Ayuu sii raaciyay.
Dhalinyaradan oo sheegay inay muddo dheer ku jireen xabsiyada dalka Tanzania oo lagu samayn jiray jirdil, halka gabdhahana lagu kufsan jiray ayaa soo bandhigay waraaqo muujinaya in masuuliyiin ka tirsan safaarada Soomaaliya ee dalka Tanzaaniya ay ka qaateen lacago laaluush ah si loo soo daayo.
“Waxaa nala geeyay maxkamad ku taal Tanzaaniya, dawladuna waa na cafiday, laakiin safiirka Soomaaliya ayaa diiday in nala sii daayo oo sheegay inay nagu jiraan dad argagixiso ah”. Ayuu yiri Cabdow C/laahi oo isna kamid ahaa dadkii mudada ku jiray xabsiyada Tanzania.
“Waxaa nala hadlay dawlada Tanzaaniya oo noo sheegtay inay na cafiday balse ay jawaab ka sugayso safaarada Soomaalida, markaan la xiriirnay safiirka wuxuu noo sheegay inaan bixino $700 calaa qof”. Ayuu yiri Cabdow oo ka codsaday masuuliyiinta ugu sarreysa dawlada Soomaaliya inay tallaabo ka qaadaan safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Tanzania C/xakiin Cali Yaasiin oo uu sheegay inuu gabay shaqadii ay ka sugaysay ummada Soomaaliyeed.
“Waxaan ka codsanaynaa madaxweyna iyo ra’iisul wasaaraha Soomaaliya inay ninkaan tallaabo ka qaadaan, waayo waxaa meesha loo geeyay inuu dadka Soomaaliyeed caawiyo wuxuu nagu sameeyayna waad aragtaan”. Ayuu yiri Cabdow.
Dhalinyarada oo ay ka muuqatay sida ay uga xunyihiin qaabka ay ula dhaqmeen ciidamada Tanzaaniya iyo Mozambique oo ku sameeyay jirdil iyo tacadiyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha ayaa sheegay inay taas uga sii darantahay sida ay ula dhaqmeen masuuliyiinta safaarada Soomaalida ee dalka Tanzania.
Waxaana ay soo bandhigeen waraaqihii ay xawilaadaha ku dhigeen eheladoodu lacag gaaraysa $700, taasoo lagu diray magacyada safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Tanzaaniya C/xakiin Cali Yaasiin iyo qunsulkiisa Maxamed Maxamuud Diiriye.
Daa’uud Cabdi Colaad oo kamid ah dhalinyaradii halkaas ka hadlay oo ay murugo ka muuqatay ayaa sheegay inay gaarayaan dadka wali ku jira xabsiyada dalka Tanzaaniya ilaa 200 oo Soomaali ah, kuwaasoo intooda badan aan awoodin inay iska baxshaan lacagta ay ka rabto safaaradu oo gaaraysa $700, oo iyaga horay loogu soo daayay.
“Waxaa nagu kalliftay inaan arrinkaan saxaafada u soo bandhigno, waxaa jira dhalinyaro saaxiibadeen ah oo wali halkaas ku jira, kuwaasoo ka dhashay qoysas dan yar ah, amaba ay dhinteen waaridkood oo aan iska bixin Karin $700.
Qunsulka Soomaaliya u fadhiya dalka Tanzaaniya Maxamed Maxamuud Diiriye oo aan la xiriirnay ayaa beeniyay arrintan, waxaana uu sheegay inaysan jirin lacag ay qaataan, balse markii la waydiiyay waxa uu kaga jawaabayo waraaqaha cadaynta ah ee lacagta loogu diray oo magaciisu ku saxiixanyahay , waa uu ka gaabsaday inuu ka jawaabo.
Soomaalida u tahriibta dalka Koonfur Afrika ayaa tacadiyo kala kulma wadamada Afrikaanka ah ee ay sii marayaan inta ay ku guda jiraan safarkooda, taasoo mararka qaar ay ka dhaxlaan tacadiyo ay kamid tahay kufsi, jirdil iyo iyadoo sanado farabadan xabsiyada lagu hayo oo aan maxkamad lasoo taagin.